Ny Boky Faharoan’ i Nefia
Ny fitantarana ny nahafatesan’ i Lehia. Nikomy taminy ny rahalahin’ i Nefia. Nilaza mialoha tamin’ i Nefia ny Tompo mba hanainga hankany an-tany foana. Ny diany tany an-tany foana sy ny sisa.
Naminany momba ny tanim-pahafahana iray i Lehia—Haely patrana ny taranany ary hokapohina raha mitsipaka ny Iray Masin’ ny Isiraely—Namporisika ny zanany lahy izy hitafy ny fiarovantenan’ ny fahamarinana. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Ny fahatongavan’ ny fanavotana amin’ ny alalan’ ny Mesia Masina—Ny fahafahana misafidy (ny maha-tompon-tsafidy) no ilaina amin’ ny fahavelomana sy ny fivoarana—Lavo i Adama mba hisian’ ny olona—Ny fahafahan’ ny olona misafidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Nahita ny Nefita tamin’ ny fahitana i Josefa tany Egypta—Naminany ny momba an’ i Joseph Smith mpahita amin’ ny andro farany izy; ny momba an’ i Mosesy izay hanafaka an’ i Isiraely; ary ny momba ny fivoahan’ ny Bokin’ i Môrmôna. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Nanoro hevitra sy nitso-drano ny taranany i Lehia—Nodimandry izy ary nalevina—Nifaly tamin’ ny hatsaram-pon’ Andriamanitra i Nefia—Nametraka mandrakizay ny fitokiany tamin’ Andriamanitra i Nefia. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Ny Nefita dia nisaraka tamin’ ny Lamanita, nitandrina ny lalàn’ i Mosesy ary nanorina tempoly iray—Noho ny tsy finoany dia nesorina teo anatrehan’ ny Tompo sy nozonina ary tonga matroka fihodirana ny Lamanita ka nanjary antambo ho an’ ny Nefita. Tokony ho 588–559 talohan’ i J.K.
Namohafoha ny tantaran’ ny Jiosy i Jakôba: Ny fahababoana tany Babylona sy ny fiverenana; ny asa fanompoana sy ny fanomboana ny Iray Masin’ ny Isiraely; ny fanampiana noraisina avy tamin’ ny Jentilisa; ary ny fampodiana ny Jiosy amin’ ny laoniny amin’ ny andro farany rehefa mino ny Mesia izy. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Niteny ho an’ ny Mesia i Isaia—Hanana ny lelan’ ny olo-mahay ny Mesia—Hatolony ny mpikapoka ny lamosiny—Tsy hangaihay Izy—Ampitahao amin’ i Isaia 50. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hampionona an’ i Ziona sy hanangona an’ i Isiraely ny Tompo amin’ ny andro farany—Ho tonga any Ziona amim-pifaliana lehibe ny voavotra—Ampitahao amin’ i Isaia 51 sy 52:1–2. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hangonina eo amin’ ny tany rehetra nampanantenaina ny Jiosy—Ny fanarenana ny olona amin’ ny fahalavoana amin’ ny alalan’ ny Sorompanavotana—Hivoaka avy any am-pasana ny tenan’ ny maty ary avy any amin’ ny helo sy ny paradisa kosa ny fanahiny—Hotsaraina izy—Ny Sorompanavotana no namonjy tamin’ ny fahafatesana, ny helo, ny devoly, ary ny fijaliana tsisy fiafarany—Ny marina no voavonjy ao amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra—Nambara ny famaizana noho ny fahotana—Ny Iray Masin’ ny Isiraely no mpiandry ny vavahady. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hohomboan’ ny Jiosy ny Andriamaniny—Haely patrana izy mandra-panombohany hino Azy—Ho tanim-pahafahana i Amerika izay tsy hisy mpanjaka hanapaka azy—Mihavàna amin’ Andriamanitra ianareo ka raiso ny famonjena amin’ ny alalan’ ny fahasoavany. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Nahita ny Mpanavotra azy i Jakôba—Ny lalàn’ i Mosesy no tandindon’ i Kristy ary nanaporofo fa ho avy Izy. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Nahita ny tempolin’ ny andro farany, ny fanangonana an’ i Isiraely sy ny fitsarana ary ny fandriampahalemana tamin’ ny arivotaona i Isaia—Haetry ny mpiavonavona sy ny olon-dratsy amin’ ny Fiaviana Fanindroany—Ampitahao amin’ i Isaia 2. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hofaizina i Joda sy i Jerosalema noho ny tsy fankatoavany—Nandahateny taminy sy nitsara ny vahoakany ny Tompo—Nozonina sady nampijaliana ny zanakavavin’ i Ziona noho ny rehak’ izao tontolo izao. Ampitahao amin’ i Isaia 3. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Havotana i Ziona sy ny zanakavaviny ary hodiovina amin’ ny andron’ ny arivotaona—Ampitahao amin’ i Isaia 4. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Ho aolo ny tanimbolin’ ny Tompo (Isiraely) ary haely patrana ny olony—Antambo no hanjo ireo izay mivadika sy misaratsaraka—Hanangana faneva ny Tompo ary hanangona an’ i Isiraely—Ampitahao amin’ i Isaia 5. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Nahita ny Tompo i Isaia—Navela ny fahotan’ i Isaia—Nantsoina haminany izy—Naminany ny amin’ ny fandavan’ ny Jiosy ny fampianaran’ i Kristy izy—Ny sisa tavela dia hiverina—Ampitahao amin’ i Isaia 6. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Namaky ady tamin’ i Joda i Efraîma sy i Syria—Hateraky ny virijiny i Kristy—Ampitahao amin’ i Isaia 7. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Ho toy ny vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka i Kristy—Tadiavo ny Tompo fa tsy ireo mpisikidy mitsiatsiaka—Itodiho ny lalàna sy ny fanambarana mba ho torolalana—Ampitahao amin’ i Isaia 8. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Niteny ho an’ ny Mesia i Isaia—Hahita mazava lehibe ny olona ao amin’ ny haizina—Zaza no nateraka ho antsika—Ho Andrian’ ny Fiadanana Izy ary hanjaka eo amin’ ny seza fiandrianan’ i Davida—Ampitahao amin’ i Isaia 9. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Ny fandravana an’ i Asyria dia tandindon’ ny famongorana ny olon-dratsy amin’ ny Fiaviany Fanindroany—Olom-bitsy no ho tavela aorian’ ny Fiavian’ ny Tompo indray—Hiverina ny sisa tavela amin’ i Jakoba amin’ izany andro izany—Ampitahao amin’ i Isaia 10. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hitsara araka ny rariny ny vatan’ i Jese (i Kristy)—Hahenika ny tany ny fahalalana an’ Andriamanitra amin’ ny Arivotaona—Hanangana faneva ny Tompo ka hanangona an’ i Isiraely—Ampitahao amin’ i Isaia 11. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hidera ny Tompo ny olona rehetra amin’ ny arivotaona—Honina eo anivony Izy—Ampitahao amin’ i Isaia 12. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Ny fandravana an’ i Babylona dia tandindon’ ny famongorana amin’ ny Fiaviany Fanindroany—Ho andron’ ny fahatezerana sy ny valifaty izany—Hirodana mandrakizay i Babylona (izao tontolo izao)—Ampitahao amin’ i Isaia 13. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Isiraely dia hangonina ary hankafy ny fitsaharan’ ny arivotaona—Noroahina hiala tany an-danitra i Losifera noho ny fikomiany—Handresy an’ i Babylona (izao tontolo izao) i Isiraely—Ampitahao amin’ i Isaia 14. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Nirehareha ny amin’ ny fanazavan-tsaina i Nefia—Hazava ny faminanian’ i Isaia amin’ ny andro farany—Ny Jiosy dia hiverina avy any Babylona, hanombo ny Mesia sy haely patrana ary hampahoriana—Hampodiana izy rehefa mino ny Mesia—Ho tonga voalohany Izy, eninjato taona taorian’ ny nandaozan’ i Lehia an’ i Jerosalema—Nitandrina ny lalàn’ i Mosesy ny Nefita sady nino an’ i Kristy, dia ny Iray Masin’ ny Isiraely. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hampianatra ny Nefita i Kristy—Nahita ny famongorana ny olony i Nefia—Hiteny avy amin’ ny vovoka ireo—Hanorina fiangonana sandoka sy firaisana tsikombakomba miafina ny Jentilisa—Ny Tompo dia nandrara ny olona tsy hampiasa ny komiberaky ny mpisorona. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hanenika ny tany ny fahamaizinana sy ny apôstazia amin’ ny andro farany—Hivoaka ny Bokin’ i Môrmôna—Ny vavolombelona telo no hanambara ny boky—Hilaza ny olo-mahay fa tsy afaka mamaky ny boky voafehin’ ny tombo-kase izy—Hanao asa iray mahatalanjona sy mahagaga ny Tompo—Ampitahao amin’ Isaia 29. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Haorina ny fiangonana sandoka marobe amin’ ny andro farany—Hampianatra fotopampianarana diso, tsy ilaina ary tsy misy heviny ireny—Ho sesehena ny apôstazia noho ny mpampianatra sandoka—Ho romotra ny devoly ao am-pon’ ny olona—Hampianariny avokoa ny toetoetry ny fotopampianarana sandoka. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Hitsipaka ny Bokin’ i Môrmôna ny Jentilisa maro—Hilaza izy hoe, Tsy mila Baiboly intsony izahay—Niteny tamin’ ny firenena maro ny Tompo—Hitsara izao tontolo izao Izy araka ireo boky izay hosoratana. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Ho tafiditra ho isan’ ny vahoakan’ ny fanekempihavanana ny Jentilisa niova fo—Hino ny teny ny Lamanita sy ny Jiosy maro ka hanjary mahatehotia—Hampodiana amin’ ny laoniny Isiraely ary hofongorana ny olon-dratsy. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Nilaza ny antony nanaovana batisa an’ i Kristy i Nefia—Tsy maintsy hanara-dia an’ i Kristy ka hatao batisa sy handray ny Fanahy Masina ary haharitra hatramin’ ny farany ny olona mba hovonjena—Ny fibebahana sy ny batisa no varavaran’ ny lalana ety sy tery. Ny fahatongavan’ ny fiainana mandrakizay amin’ ireo izay nitandrina ny didy rehefa avy natao batisa. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Miteny amin’ ny herin’ ny Fanahy Masina ny anjely—Tsy maintsy mivavaka ny olona hahazoany fahalalana ho an’ ny tenany avy amin’ ny Fanahy Masina. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.
Ny fahamarinan’ ny tenin’ i Nefia—Ny fanambarany ny amin’ i Kristy—Ireo izay nino an’ i Kristy dia hino ny tenin’ i Nefia, izay hijoro ho vavolombelona eo anoloan’ ny toeram-pitsarana. Tokony ho 559–545 talohan’ i J.K.